I-India manje isivulekele izivakashi zakwamanye amazwe ezigonywe ngokuphelele
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-India Breaking » I-India manje isivulekele izivakashi zakwamanye amazwe ezigonywe ngokuphelele
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba ze-India Breaking • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Shopping • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Kungokokuqala ukuthi i-India ivumele izivakashi zakwamanye amazwe ukuthi zingene ezweni kusukela ngoMashi 2020 lapho ibeka khona ukuvalwa kwayo kokuqala ezweni lonke.
Izivakashi zakwamanye amazwe ezigonywe ngokuphelele ezihamba ezindizeni eziqashiwe zivunyelwe ukungena eNdiya kusukela namuhla.
Abahambi bamanye amazwe ezindizeni ezijwayelekile bazokwazi ukungena eNdiya kusuka ngoNovemba 15.
Akukacaci noma izivakashi ezifika kuzofanele zihlukaniselwe abantu kepha kufanele zigonywe ngokuphelele futhi zihlolwe ukuthi azinalo yini leli gciwane kungakapheli amahora angama-72 ukusuka kwazo.
Izivakashi zakwamanye amazwe ekugcineni zivunyelwe ukungena India futhi, ngokokuqala ngqa kusukela ngoMashi 2020, lapho izwe lafaka isibalo sokuqala se-COVID-19 ezweni lonke.
Ekuziphumuleni kwakamuva kwama-COVID-19 curbs ayo, Izikhulu zikahulumeni waseNdiya umemezele ngoLwesihlanu ukuthi izwe seliphinde lavula izivakashi ezigonywe ngokuphelele ezihambela izindiza eziqashiwe.
Abahambi bakwamanye amazwe ezindizeni ezijwayelekile bazokwazi ukungena India kusukela ngoNovemba 15, izikhulu zengeze.
Okwamanje akukacaci ukuthi izivakashi ezizayo kuzofanele zizihlukanise India, kepha kumele bagonywe ngokuphelele futhi bahlolelwe ukuthi abanalo igciwane le-COVID-19 kungakapheli amahora angama-72 bezindiza.
Isinqumo sokuvulwa kabusha kwezwe, esamenyezelwa ekuqaleni kwale nyanga ngumnyango wezasekhaya eNdiya, siza ngesikhathi ukutheleleka kwansuku zonke eNdiya kwehle kwaba ngaphansi kuka-20,000 400,000 kusuka kwinani eliphakeme elingu-XNUMX ngoMeyi kanti abantu abaningi sebegonyiwe.
India iphathe imithamo yokugoma engaphezu kwezigidi ezingama-970. Cishe amaphesenti angama-70 wabantu abadala abafanelekile okungenani anethamo elilodwa.
Ukuncishiswa kwemikhawulo kubavakashi bakwamanye amazwe abavakashela izwe, noma kunjalo, kuqondana nesikhathi sezivakashi zasekhaya saseNdiya kanye nesikhathi samaholide. Kumanje, sekungenise ukukhathazeka ngezikhulu zezempilo esexwayise ngokunganaki.
Ngasekuqaleni kwale nyanga, i-Indian Council of Medical Research, indikimba yezokwelapha eNdiya, ixwayise ngokuthi “ukuziphindiselela kwezokuvakasha” kungaholela ekwandeni kwezifo ze-COVID-19 uma izivakashi zingalandeli imithetho yokuphepha.
Ngokwemininingwane esemthethweni, izivakashi zakwamanye amazwe ezingaphansi kwezigidi ezintathu zivakashele eNdiya ngo-2020, okwakungukucwila okungaphezu kwamaphesenti angama-75 uma kuqhathaniswa nango-2019.
Ubuwazi ukuthi kunendawo yase-Aussie eMunich?
Iziqondiso Ezintsha Zezempilo ze-COVID-19 ze-Entebbe...
I-WTTC: ISaudi Arabia izosingatha i-Global 22nd ezayo...
I-UK iyayekisa imithetho yokungena yabokufika abagonywe ngokuphelele
I-Amazing Tanzania Novelist Iklonyeliswe Ngomklomelo weNobel we ...
I-WTM London yembula iSaudi njengoNdunankulu Partner we-2021
AmaSandals Resorts akhipha ukukhathazeka ezinhlelweni zokuhamba e ...
Izinxushunxushu zokuvakasha zaphesheya zisolwa ngezinqubomgomo zikahulumeni
Izindawo ezinhle kakhulu zedolobha lomhlaba jikelele ze-US ...
Utah, Hawaii, Idaho, Kentucky, New Mexico: Okuningi...
Abantu baseCanada Manje Bangabhukha Ukuhlolwa Kwe-PCR Ehhotela e-Jamaica...
ILufthansa iqeda ngempumelelo ukuphothulwa kwe ...
I-Wizz Air, iFrontier, iVolaris, iJetSmart bayayithanda i-Airbus...
Ungqongqoshe Wezokuvakasha eJamaica: Umhlaba Omusha Wezempilo &...
Ezokuvakasha Kumele Manje Zibe Ingxenye Yesixazululo Sokuguquguquka Kwesimo Sezulu...
Ochwepheshe abaphezulu besifo sikashukela kanye nenkampani ye-AI ebheke eGuam
Izibalo Zamuva Zethrafikhi Yesikhumulo Sezindiza saseFraport zikaSepthemba ...
IQatar Airways ilwa nokushushumbiswa kwezilwane zasendle ngokungemthetho
Kuphi Futhi Nini Ama-VIP Aphezulu Emakethe Yezokuvakasha Yomhlaba...
Umkhakha wezokuvakasha kufanele kuthiwe uvulekile yi ...
Ukwenza i-tweeting kuyilungelo lomuntu - naseNigeria
Ukuvulwa kabusha kwe-US: Ukugoma okugcwele kanye ne-COVID-19 engemihle...